रिहाई हुँदै रबि लामिछाने भोलिको दिन कुर्नु होला!रबिको पहिलो अन्तर्वार्ता पनि हेर्नुहोस
यो भिडियो पूरा हेर्नुहोला|https://youtu.be/mVnNjIPWAmwकाठमान्डौ, न्युज २४ टेलिभिजनका पत्रकार बिगत ९ दिन देखि चितवन स्थित हिरासत मा छन पत्रकार सालिकराम पुडासैनी को आत्म हत्या को बिषय मा उनको नाम जोडिए \_पछी उनि लाइ चितवन जिल्ला प्रहरीले काठमान्डौ स्थित उनकै कार्यालय बाट उनि लगाएत तिन जनालाई पक्राउ गरेको हो साउन २९ गते सार्बजनिक भएको भिडियो मा सालिकराम ले उनको नाम लिदै आफ्नो ज्यान त्याग गरेको भिडियो मा देख्न सकिन्छ
हि*रासतमा रहेका रवि लामिछानेले यसो भने हेर्नुहोस् अडियो : चर्चित कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने अहिले हिरासतमा छन् ! पत्रकार सालिकराम पुडासैनी को आ’त्मह’त्याको बारेमा अनुसन्धानको लागि रवि हिरासतमा रहेका छन् ! अहिले रवि लामिछाने सँगको एक अन्तर्वार्ता बाहिर आएको छ ! पत्रकार टेकनारायण भट्टराईले भदौ ४ गते बिहान बुधवार रबिलामिछाने सँग लिएको अन्तर्वार्ता पत्रकार टेकनारायण भट्टराईको आफ्नै युट्युब च्यानल बाट शुक्रवार दिउसो अपलोड भएको छ !
अन्तर्वातामा रवि लामिछानेले आफूले केही गल्ती नगरेको भए पनि म्याद थपेर आफूलाई फसाउन खोजेको बताएका छन् । त्यस्तै, शालिकरामले आत्महत्या अघि रेकर्ड गरेको भिडियो कसरी चोरी भयो भने प्रश्न समेत गरेका छन् । अनुसन्धान आफूलाई फसाउनेतर्फ केन्द्रित भएको भन्दै लामिछानेले एसपी दानबहादुर मल्लको अन्डरमा भएको अनुसन्धानमाथि अविश्वास प्रकट गरेका छन् ।
अन्तर्वार्तामा रविले बोलेको कुरा ‘अस्मितालाई चिनाइएको भन्ने कुरा झुट भएको थाहा हुँदाहुँदै पनि अझै पनि यो विषयमा लिङ्गरिङ गर्नुको अर्थ के ? एउटा कुरा । त्यो भडियो त परिवारले पहिले नै हेरेको हो नि त । परिवारले हेरिसकेको भिडियो फेरि मिडियामार्फत बाहिर निकाल्न लगाएर हामीलाई समात्न लगाउनुको अर्थ के ? जतिखेर समातियो त्यतिखेर यो हत्या हो या आत्महत्या क्लियर थिएन ।
समाइयो ठिक छ ल्याइयो । ल्याइसकेपछि उनीहरुको पहिलो पटक भेट भयो । न उनीहरुबीच कुनै कनेक्सन छ । न कुराकानी छ । न टेक्स्ट छ । न मान्छे चिनेको । कुनै पनि चिज प्रमाणित भएन । उहाँहरुको प्रोसेस होला तर, त्यो प्रोसेसले मेरो भिक्टिम राइट्स गएन ? तीन वटा प्रोगाम नजाँदा कति मानिसको भ्वाइस गएन ? डर त मेरो भ्वाइसँग भयो उहाँलाई । त्यही डर त हो नि सबैभन्दा ठूलो कुरा ।
एउटा त्यो अर्को कुरा जसले अनुसन्धानको क्रममा भएको भिडियो सरकारी फाइलबाट चोरेर या निकालेर त्यल्लाई दिइयो । कसले दियो ? दानबहादुर जी ले दिनुभयो । किनभने उहाँले त मसँग के भन्नुभाथ्यो भने म सँग छ है । मैले राख्या छु है । फुलु लगाएर बर्दीमा भन्नुभएको हो । उहाँले दिनुभयो । उहाँले नदिनुभएको भए सर्वेन्द्र जीले दिनुभयो । किनभने उहाँले रिपोर्ट गर्ने सर्वेन्द्र जीलाई होला । अथवा उहाँहरुको फरेन्सिक ल्याव होला । उहाँले दिनुभयो भने उहाँमाथि छानविन किन नहुने ?
ठिक छ उहाँले दिनुभयो । मैले त्यो भिडियो परिवारबाट लिएको भन्नुभयो । १। घटनास्थल सुरक्षित रहेछ त ? रहेछ त ? परिवारलाई त उहाँले दिनुभयो होला । अथवा घटनास्थलबाट परिवारले चोरेर लग्यो होला । अनि त्यो घटनास्थल शिल गरेको जिम्मेवारी कसको हो ? दानबहादुर मल्ल जीको । दानबहादुर मल्ल जीले सरकारी अनुसन्धानमा रहेको कागज, सरकारी प्रोफाइल, भिडियो चोर्नुभयो । चोरेर परिवारलाई दिनुभयो ।
आज सार्बजनिक भएको उनको अडियो मा उनीलाई प्रहरी बाट नै असजिलो भैरहेको जनाएका थिए पहिलो ५ दिन जेल बसेका लामिछानेलाई अदालत ले पुन: ५ दिन अनुसन्धान को लागि म्याद थप गर्न आदेश दिएको थियो सबै अनुसन्धान सकिदा पनि प्रहरीले आफुलाई हिरासत मा लिएको कारण ले प्रहरी माथि नै संका लागेको उनेला अडियो मा बताएका थिए अब १० दिन को सुनवाई मा अदालत ले रिहाइ गर्ने कि अरु नै केहि गर्ने भन्ने निर्णय गर्दछ त्यसको लागि भने हामि ले भोलिको दिन सम्म कुर्नु पर्ने देखिन्छ ।